Mazuva eSnapchat ari kushandiswa chete ekutumira mifananidzo pakati peshamwari yapera.
Iyi social media platform yakachinja. Kambani yako haigone kufuratira zvinokanganisa nzira yekushambadzira iyi pane rako bhizinesi.
Icho chakakosha zvachose kana iwe uri kutarisa Chizvarwa Z semusika wako wekutarisa. Zvakadaro nekuti 71% yeGen Z shandisa Snapchat sechikamu chezviitiko zvavo zvezuva nezuva. Uyezve, 51% yeboka iri vanoshandisa Snapchat dzinokwana kagumi pazuva.
Nepo Snapchat ichizivikanwa nekuzivikanwa kwayo nevechidiki, yayo kupinda mumusika iri kutanga kurova vechidiki vechidiki uye mazera ekare zvakare.
Snapchat inzira inoshanda yekushambadzira kana yako yazvino misika yemusika ikawira chero pakati pemakore gumi nemaviri nemakumi matatu nematatu. Asi tarisa maitiro aya sezvo mazera ekare anogona kuramba achichinjira kuchikuva ichi.
In Q4 ya2017, Snapchat yakarova 187 mamirioni anoshanda ezuva nezuva vashandisi. Iyo chikuva yaona zvinopfuura 18% yekukura mwero maererano nevashandisi vezuva nezuva mugore rapfuura.
Iko hakuna chiratidzo chekunonoka, uye ini ndinotarisira izvi kushambadzira maitiro kuenderera mberi mune ramangwana.
Izvi zvinonyatso kurevei kune rako bhizinesi?
Idzi inhau huru. Iwe ikozvino une imwe inoshanda yekushambadzira chiteshi ku shamwaridzana nevatengi vako.
Asi izvi zvinogona kutyisidzira kana kuvhiringidza kana usati wamboshandisa Snapchat kare uye usingazive maitiro ekuishandisa kubhizinesi rako.
Neraki, iwe uri muhombe. Ini ndinokuratidza iyo nzira gumi neshanu dzekushandisa Snapchat kune rako bhizinesi
1. Tumira kunyaya yako kazhinji
Paunenge iwe wagadzira iyo Snapchat account, unofanirwa kuona kuti iri kushanda. Nzira yakanakisa yekutaura izvi ndeyokuwedzera zvemukati nyaya yako zuva nezuva.
Chero chipi zvacho chaunotumira paSnapchat chichanyangarika mushure memaawa makumi maviri nemana. Kutumira zvemukati kazhinji kunozochengetedza yako brand nyowani mundangariro dzevateveri vako.
Ingo usapfuura mwero. Kutumira ka20 muzuva rimwe hakubatsiri.
Ndiko nekuti vanhu vachasvetuka pamusoro pezvako zvinyorwa. Zvichienderana nekuti vanhu vangani vashandisi vanotevera paSnapchat, ivo vanozove vane yakawanda nyaya yekuona zuva rega rega.
Asi izvi hazvireve kuti vari kuzoona yega yega posvo yakazara.
Maererano kudzidza kwakaitwa neveSnaplytics, kubatanidzwa kunodonha ne36% kana vashandisi vasvika pachikamu chechina chenyaya. Vakaona zvakare kuti vangangoita 80% yevateveri vako vanozoona yako posvo nezve 4 kana maawa mashanu mushure mekunge yawedzerwa kunyaya yako.
Izvi zvinorevei kwauri?
Kubva pane aya manhamba, ini ndinokurudzira kuvandudza yako Snapchat nyaya kanenge katatu pazuva, maawa mana kana mashanu.
Izvi zvinobatsira kuchengetedza kubatanidzwa kwako kwakakwirira uye kudzivirira vateveri vako kubva kusvetuka pamusoro pezvako zvemukati.
2. Kurudzira yako Snapchat account pane mamwe maratidziro enzira
Kuti zano rako reSnapchat ribudirire, unoda vateveri.
Panzvimbo pekuyedza kuburitsa vateveri kunze kwemweya mutete, edza kunongedza vashandisi vanoteera ako maakaundi ebhizinesi pane mamwe mapuratifomu.
Tarisa kuti sei Vanhu Magazini vanoshandisa zano iri mune yavo Instagram bio:
Izvi zvinonyanya kukosha kwauri, kunyanya kana iwe uchangogadzira iyo Snapchat account yekambani yako. Hapana munhu achaziva kuti une account kunze kwekunge iwe ukavaudza.
Pamusoro pe Instagram, unogona kusimudzira pane ako Facebook uye Twitter maakaunzi. Iwe unogona kunyange kushanda uku kusimudzira mumavhidhiyo eYouTube.
Udza vanyoreri vako veemail kuti vakutevere paSnapchat uye uzvikande pawebhusaiti yako futi.
Iyo yakawanda nzira iwe yaunosimudzira pairi, iyo inowedzera mukana wekutora vamwe vateveri vaunowana iwe.
3. Gadzira lens yakatsigirwa
Vanhu vanofarira kushandisa Snapchat mafirita uye lenzi.
Inofungidzirwa kuti mafirita anotsigirwa anoonekwa ne Vashandi vanosvika mamiriyoni e16 zuva nezuva. Aya mafirita inzira yekuti vanhu vatore mifananidzo yekugadzira.
Snapchat ine zvakawanda zvavo zvakavakirwa zvakananga mupuratifomu yavo. Panzvimbo pekutumira yakakosha selfie, vashandisi vanogona kuita kuti chifananidzo chisvike uye chena, vanoshandisa firita yekuita kuti maziso avo akure zvisina kujairika, kana kuita kuti mhuno yavo inyangarike.
Mamwe mafirita evhidhiyo snaps anogona kunyange kuchinja kukwirira kwenzwi rako.
Zvese izvi zvakagadzirwa kuti vashandisi vafare. Ivo vanozotumira snap kushamwari dzavo neimwe yeaya mafirita nekuti zvinonakidza uye kazhinji zvinosetsa.
Asi ikozvino mabhizinesi anogona kugadzira inotsigirwa firita zvakare. Gatorade vakashandisa zano iri panguva yeSupp Bowl 50, uye ikashanduka kuita imwe yemakundano eSpapchat akabudirira pane zvese zvakanyorwa.
Kana iwe wakamboona Super Bowl, iwe unoziva itsika yemudzidzisi anokunda kuti Gatorade arasirwe pamusoro wake nevatambi. Saka Gatorade yakagadzira firita yakatsigirwa panguva yemutambo iyo yaizoteedzera Gatorade kukandwa pamusoro wemushandisi.
Sefa yaive nayo vanopfuura mamirioni zana nemakumi manomwe nemashanu ekuona uye vakawedzera yavo yekutenga chinangwa ne8%.
Heano mumwe muenzaniso kubva Taco Bell kukuratidza kuti mafirita aya akaita sei:
Sezvauri kuona, mafirita pachawo akapusa, asi ivo vanogadzira brand kuziva uye vanokubatsira iwe kugadzira kubatana.
Dambudziko chete nezano iri nderekuti zvinodhura. Kana iwe uchida kugadzira firita panguva yezororo kana chiitiko chakakosha, senge Super Bowl, unofanirwa kunge wakagadzirira kudya pakati $ 100,000 uye $ 750,000.
Mutengo iwoyo unochengeta firita yako ichishanda kwemaawa makumi maviri nemana. Asi kana iwe uchikwanisa kuitenga, iyo kudzoka pane yako investa inogona kuve yakakura
Iyo Taco Bell firita pamusoro yakaonekwa makumi maviri nemakumi mana nemazana emamiriyoni nguva. Wepakati mushandisi akapedza 224 masekondi achitamba ne lens asati agovana nayo neshamwari.
4. Rega vanhu vanokurudzira vanhu kuti vatore account yako
Imwe nzira huru yekuwana vateveri vakawanda uye kuwedzera kubatanidzwa iri kuburikidza magariro chiratidzo.
Vakakurumbira nevamwe vanopesvedzera vatove nekutevera kwakadzama pane vezvenhau. Tora mukana weizvozvo.
Kana iwe ukatendera mumwe munhu kutora account yako yeSnapchat, iwe unogona kufumura chiratidzo chako kune vakawanda vakawandisa vateereri. Vamwe vevanhu ava vangatomboziva kuti kambani yako yaivapo kusvikira vaona munhu anokurudzira achitaura nezvazvo.
Ungangoda kubhadhara anokurudzira kuti aite izvi kunze kwekunge uine imwe chibvumirano chekuwirirana kana kufarira zvakajairika mune chero chinhu chauri kukurudzira.
Heino muenzaniso wakanaka weizvo zvandiri kutaura nezvazvo kubva iHeartRadio:
Vakatendera muimbi Hailee Steinfeld kutora account yavo. Nekuda kweizvozvo, akakurudzira kutora kutora kune vateveri vake pasocial media.
Hailee ane vateveri vanopfuura 933k pa Twitter uye vanopfuura mamirioni masere evateveri ve Instagram. Uku kukuru kuburitswa kwechiratidzo kweIHeartRadio, kunyanya nekuti iine hukama chaihwo neindasitiri yavo.
Izvo zvakakosha kuti iwe ugare uchifunga mupfungwa zvakare. Iwe unogona kuwana nyanzvi basketball player ine mamirioni gumi vateveri ve Instagram, asi kana mitambo isina hukama neako indasitiri, vateveri vavo vanogona kunge vasina kukodzera kune yako kambani.
5. Ratidza zvirimo zvinogadzirwa nemushandisi
Kumbira vateveri vako kuti vakutumire mifananidzo nemavhidhiyo avo vachitaurirana nekambani yako kana kushandisa zvigadzirwa zvako.
Unogona kudzoreredza izvi zvemukati pane yako Snapchat nyaya.
Nzira huru yekukurudzira zvemukati-inogadzirwa zvemukati ndeyekumhanyisa makwikwi uye akafanana kukwidziridzwa.
GrubHub vakashandisa zano iri paSnapchat makore mashoma kumashure. Mushandirapamwe wavo wakabudirira zvikuru.
Vakamhanyisa makwikwi anonzi "SnapHunt," ayo akagara kwevhiki. Mazuva ese ivo vakatumira dambudziko nyowani. Iye anokunda akasarudzwa pamakwikwi ese uye akahwina $ 50 kadhi rechipo.
Munguva yemakwikwi aya, vateveri vaGrubHub yakakura ne20%. Uyezve, 30% yevateveri vavo vakapinda mumakwikwi aya.
Zvakachengeteka kutaura kuti kubatanidzwa kwaive kwakakwirira.
6. Govera discounts uye promo macode
Hauna chokwadi chekuisa pane yako nyaya?
Paunenge usina chokwadi, ipa vateveri vako chimwe chinhu chavanogona kushandisa. Tumira zvidzoreso uye zvimwe zvekushambadzira zvinopa kuburikidza neSnapchat.
Iri zano richakubatsira iwe kutyaira kutengesa uye kuwedzera shanduko. RUDO vakashandisa zano iri kupa vateveri vavo veSnapchat 15% kubva pakutenga.
Paunenge uchitumira paSnapchat, chengeta chinangwa chekambani yako mupfungwa. Usatadziswe nemamwe mabhero uye muridzo.
Iwe unoda kutengesa.
Kupa zvikwereti inzira yakanaka yekuita izvi.
7. Tora imwe account
Pakutanga takataura nezve kurega mumwe munhu atore yako Snapchat account. Asi imwe nzira inoshanda inobata imwe account iwe pachako.
Kana mumwe munhu atora account yako, iwe uri kuvimba nevateveri vemunhu iyeye kukuwedzera paSnapchat kuti uone zvemukati.
Asi kana iwe ukatora account, vateereri havafanirwe kuita chero chinhu. Iri richava basa rako kuvaratidza kuti vanofanirwa kunge vachitevera zita rako.
Ita shuwa kuti zvemukati zvirimo.
Kunyangwe kana vakasawedzera yako Snapchat account, iwe uchazokwanisa kugadzira brand kuziva nevateereri vatsva.
8. Kusimudzira chigadzirwa chitsva
Chengetedza vateveri vako kusvika parizvino neese anonakidza nhau kubva kune yako brand. Kugadzirwa kwechigadzirwa nyowani kunofanirwa kutaurwa.
Kunyangwe kana chigadzirwa chako chisati chatanga, unogona kuvaka hype uye kutarisira-vatengi vanozove vakagadzirira icho kana chigadzirwa chako chazoburitswa.
Hechino chinhu chekutora mukufunga. Kangani vanhu vanoshanyira webhusaiti yako? Ini ndinodisa kubheja kuti muvhareji mutengi haasi kutarisa webhusaiti yako zuva nezuva kune chero zvigadziriso.
Asi ivo vari kutarisa Snapchat mazuva ese.
Kungoti nekuti urikurudzira kuvhurwa kwechigadzirwa chitsva pawebhusaiti yako hazvireve kuti vanhu vachazviona. Ndosaka iwe uchifanira kutora mukana weimwe nzira dzekutengesa.
Heino muenzaniso weiyo nyowani yechigadzirwa inosimudzira kuburikidza neSnapchat kubva McDonald's:
Edza kutevera kwavo kutungamira nguva inotevera yaunoda kuudza vateveri vako nezve chigadzirwa chitsva kana sevhisi.
9. Govera wega mukana
Zviri pachena kuti hazvina musoro kurega vateveri vako vezvenhau kuti vafambe vakananga muhofisi mako uye vaongorore zvinhu.
Asi naSpapchat, unogona kuvapa iwo iwo wega manzwiro akasarudzika nekuvapa ivo vari kumashure-kwe-zviitiko zvemukati. Ratidza vateveri vako kuti zvakaita sei muhofisi yako kana nzvimbo yekugadzira.
Kana iwe uri pachiitiko, tora zvinyorwa zveimwe yechiito kumashure.
Rudzi urwu rwezviri mukati runochengeta vateveri vako vachibatikana nekuti zvinoita kuti vanzwe sekunge vari kuwana kurapwa kweVIP.
10. Pindura vateveri vako
Ruzhinji rweyako Snapchat zano inofanirwa kuve yekutarisa pakuisa zvemukati kune yako nyaya. Zvisinei, iyo haisi iyo chete nzira yekuita nevateereri vako.
Vateveri vanogona kupindura kune yako nyaya uye ndokutumira iwe yakananga mameseji zvakare.
Pane mamwe mapuratifomu enhau, senge Facebook, Instagram, kana Twitter, munhu wese anogona kuona kuti uri kupindura vateveri here kana kwete.
Asi paSnapchat, iwe chete uye nemunhu anotumira meseji munoziva kana muchipindura. Saka zviri nyore kumakambani kufuratira zvataurwa paSnapchat.
Asi iwe unofanirwa kuramba uchiedza kupindura kune vateveri vako.
Kuwana mhinduro yemunhu kubva kuchiratidzo kunoita kuti mushandisi anzwe akakosha. Kufuratira meseji yavo kunovaratidza kuti hauna hanya nezvavari kutaura.
68% yevatengi taura chikonzero nei varega kushandisa imwe mhando ndeyekuti havafunge kuti kambani ine hanya navo.
Iwe unogona nyore kudzivisa izvi nekungopindura iwo mameseji epachivande.
11. Tumira zvirimo zvirimo
Kubvarura kwako hakufanirwe kuve mifananidzo isina pfungwa yezvigadzirwa zvako. Iwe unogona kushandisa chikuva ichi kuratidza vateereri vako yako mhando inoziva dzakasiyana misoro.
Iwe unogona kutaura pamusoro pemasangano anobatsira kana chero imwe mhando yekubatanidzwa munharaunda mubhizinesi rako.
Heino muenzaniso kubva njiva. Ivo vakashandisa chikuva chavo kukurukura nyaya dzekuzviremekedza:
Nyaya yavo yeSnapchat yakaratidza kubvunzurudzwa nevakadzi makumi matatu uye akasiyana masayendisiti. Vaida kuve nehurukuro yakajeka pamusoro pezvinhu zvekuzviremekedza kubatsira vakadzi kuvandudza mifananidzo yavo.
Nekuda kweizvozvo, mushandirapamwe wakava nezvinopfuura 130,000 maonero.
Ingo ita shuwa kuti unotsika nokungwarira paunenge uchisvika pane chakadai. Zviri nani kuti mabhizinesi agare kure nenyaya dzinosanganisira dzinza, chinamato, zvematongerwo enyika, nedzimwe nyaya dzinokakavara.
12. Simudzira chiitiko chiri kuuya
Kana yako kambani iri kuitisa kana kuenda kune imwe mhando yemusangano kana chiitiko, udza vateereri vako nezvazvo.
Zvichienderana nerudzi rwechiitiko icho, iwe unogona kutoyedza kuti vateveri vako vauye kuzoratidza rutsigiro rwavo.
67% yevanhu vane mikana yekutenga matikiti kuchiitiko mushure mekuona chiitiko chakafanana pane a rarama vhidhiyo kurukova.
Nepo Snapchat nehunyanzvi isiri yemavhidhiyo vhidhiyo, iri padyo padyo. Iwe unogona kufungidzira iyo chikamu chevanhu vanofarira chiitiko chichafanana.
13. Tyaira traffic kuwebhusaiti yako
Snapchat nguva pfupi yadarika yakaunza chinhu chitsva chinokutendera iwe kuti uwedzere zvinongedzo kune yako nyaya. Kuti uite izvi, ingo tora pikicha kana vhidhiyo uchishandisa kamera yavo sezvaungowanzoita.
Zvadaro tinya paperclip icon usati wawedzera nyaya yako.
Iye zvino unogona kuwedzera chinongedzo kune yako post. Vashandisi vanokwanisa kuwana iyi link kana vakatevera kurudziro pazasi penyaya yako kuti "swipe kumusoro."
Iyi inzira huru yekuwedzera yako traffic traffic.
14. Udza vateveri vako nezvechiitiko chakakosha
Chengeta vateereri vako veSnapchat vachiziva nezvemazuva akakosha ekambani yako.
Icho chiitiko chako chegumi? Izuva rekuzvarwa kwa CEO wako here?
Iwe unogona kutotaura nezve mamwe makurwe, sekutora yako zviuru gumi muteveri pane imwe pasocial media chikuva.
Zvese izvi zvikonzero zvikuru zvekutumira paSnapchat. Iko kuzorora kwakanaka kubva kune iwo akafanana anofinha machira ayo anogoverwa zuva nezuva.
Iyi piggybacks pane yangu yekupedzisira poindi. Iwe haudi kuti zvemukati zvako zvive zvinofinha.
Mazhinji emazano atakakurukura kusvika parizvino anoshanda uye anofanirwa kuiswa kune yako Snapchat yekushambadzira zano. Asi nezvakataurwa, usangotora imwechete kana maviri uye shandisa zvakafanana mazuva ese.
Unofanira kuchengeta zvinhu zvinonakidza.
Kana vateveri vako vasingafarirwe, vanomira kukutevera. Kana izvo zvangoitika, hazvizove nyore kwauri kuti utengese kune avo vanhu zvakare.
Iwe unogona kudzivirira izvi nekuchengeta zvemukati zvitsva.
Snapchat iri kukura mukuzivikanwa. Kana kambani yako isina iyo Snapchat account, iwe unofanirwa kugadzira imwe ASAP.
Asi kana yako account yatanga kushanda, iwe unofanirwa kuwana vateveri uye wovaita vabatikane.
Pakazara, iwe unoda kuve neshuwa yako Snapchat yekushambadzira nzira inoita kuti bhizinesi rako rive nani. Pamusoro pekugadzira ruzivo rwe brand, iwe unoda kutyaira kutengesa zvakare.
Kunyangwe Snapchat iri nyowani kwauri kana iwe uchitsvaga njere nyowani yekunongedza yako iripo Snapchat yekushambadzira mushandirapamwe, iwo matipi andatsanangura pamusoro apa inzvimbo huru yekutanga.
Shandisa iri gwaro sereferenzi yekuwedzera kubatanidzwa paSnapchat.
Ndedzipi nzira dzauri kushandisa kubatana nevateveri vako pane Snapchat?
Yekupedzisira Nongedzo kune B2B Kushambadzira muna 2020
77 Yakakosha Social Media Kushambadzira Statistics for 2020
Zvese zvaunoda Kuti Uzive nezveEcommerce Kushambadzira